DDoS-ukuhlaselwa: indlela yokwenza? Uhlelo i-DDoS-ukuhlaselwa
Mhlawumbe abaningi lanamuhla abasebenzisi computer ne-Internet kuye wezwa khona DDoS-ukuhlaselwa, abahlaseli ezenziwe maqondana nanoma kumawebhusayithi noma amaseva ezinkampani ezinkulu. Ake sibone ukuthi yini le DDoS-ukuhlaselwa, indlela yokukwenza wena, futhi kanjani ukuze bazivikele izenzo ezinjalo.
Okokuqala nje, mhlawumbe, siqonde ukuthi ziyini izenzo ezinjalo emthethweni. Sithi ngesikhathi esisodwa ukuthi, ekucabangeleni isihloko «DDoS-ukuhlaselwa: indlela yokukwenza wena" ulwazi uzobe bafaka zokunika ulwazi kuphela, hhayi ukusetshenziswa esiwusizo. Zonke izenzo ezinjalo kukhona amacala obugebengu.
Ukuhlaselwa ngokwayo, ngokuvamile, kuyinto ukuthumela inombolo ngokwanele izicelo eziningi kwiseva noma isayithi kukhona okwedlula izicelo umkhawulo ukuvimba umsebenzi web-isisetshenziswa noma umnikezeli wakho wesevisi njengoba isofthiwe iseva off zokuphepha, izinhlelo zokuvikela, noma asebenzise imishini ethize.
Kuyacaca ukuthi DDoS-kuhlasela ngezandla ayikwazi adalwe umsebenzisi oyedwa ngesikhathi esisodwa computer ngaphandle izinhlelo ezikhethekile. Ekugcineni, kahle, akuyona yena ahlale izinsuku ukuphela, futhi njalo ngeminithi ukuthumela izicelo iwebhusayithi umhlaseli sika. Lokhu ngeke isebenze, ngoba ukuvikelwa DDoS-ukuhlaselwa kuhlinzekelwe umhlinzeki ngamunye, futhi umsebenzisi akakwazi ukunikeza eziningi iseva noma indawo izicelo, okwakuyoholela ngesikhathi esifushane idlule umkhawulo yokulandwa sivukile izindlela eziningi ukuchumisa ukuzivikela. Ngakho ukwakha kuhlasela akho kuyodingeka usebenzise okunye. Kodwa ngalolo kamuva.
Kungani kunesidingo usongo?
Uma uqonda ukuthi DDoS-ukuhlaselwa, indlela yokukwenza bese uthumela lemali kudlulwe izicelo kwiseva, kuhle ukucabangela, kanye izindlela ngawo lezi zenzo kuyenziwa.
Lokhu kungaba alithembekile zokuvikela ayisakwazi ukubhekana ngenombolo enkulu izintuba izicelo lokuvikeleka uma umhlinzeki uhlelo noma kakhulu "OSes" yokuntuleka system imithombo ukucubungula izicelo engenayo uhlelo eminye hang noma yokukhubazeka nokunye. D.
Njengoba sekuzoqala lesi simo sibangelwa ikakhulu DDoS-kuhlasela ngezandla zakhe eyenziwa ngokuyinhloko program abaye wadala futhi lwahlolwa ngosizo nekusebenta Ukuvikelwa izinhlelo. Phela, ngesikhathi izenzo zitha, isetshenziswa njengoba isikhali DDoS futhi dos izingxenye, abathintekayo ngisho ezifana IT-imidondoshiya njenge-Yahoo, i-Microsoft, i-eBay, CNN, kanye nabanye abaningi. Iphuzu eliyinhloko kulezo zimo kwazanywa ezikhipha umncintiswano ngokuya ukukhawulela ukufinyelela izinsiza zabo ku-intanethi.
Ngokuvamile, nababhula ngezinkanyezi namuhla abahwebi electronic ukwenza okufanayo. Ukuze wenze lokhu, mane nje thwebula uhlelo DDoS-ukuhlaselwa, futhi, njengoba besho, iqhinga.
Manje amagama ambalwa mayelana Ukwahlukaniswa lolu hlobo ukuhlaselwa. Into esemqoka, lokhu konke nokuqedwa ukuhluleka iseva noma indawo. Uhlobo lokuqala ingafaka amaphutha ezihlobene ngesithembiso imiyalelo ayilungile iseva ukwenza, okuholela eshayisa umsebenzi wakhe. Eyesibili inketho - mass ukuthumela idatha yomsebenzisi, kuphumele i engapheli (isiyingi) yokuqinisekisa okwandisa umthwalo system imithombo.
Uhlobo lwesithathu - ngozamcolo. Ngokuvamile, lesi sabelo ngaphambili singalungile (lutho) ucela iseva noma inethiwekhi imishini ukuze andise umthwalo. Eyesine - okubizwa ngokuthi odla neziteshi ukuxhumana amakheli zamanga. Enye kuhlasela ingasetshenziswa esilawula amazinga okushisa afinyelela ku-ukuthi izinguquko ekucushweni ohlelweni ikhompyutha ngokwayo, okuyinto kuholela ekuhlulekeni wako. Ngokuvamile, uhlu kungaba eside.
Njengomthetho, i attack enjalo Lihlobene nokubhekana ubuso ukusingathwa ethize futhi ezihlose kuphela at predetermined web-ezinsiza (kulesibonelo ngezansi kunemibandela eyabizwa ngokuthi example.com).
Uma eziningi kakhulu hits kusayithi ngenxa ukuhlukumeza kungenxa ivimbela yokuxhumana akuyona indawo uqobo, futhi ingxenye iseva lomhlinzeki yesevisi, noma kunalokho, ngisho iseva noma uhlelo ukuphepha, kanye nokwesekwa. Ngamanye amazwi, i attack enjalo okuhloswe ngaso umnikazi umhlinzeki ibamba okuvela uyaphika inkonzo okweqa inkontileka ezithile umkhawulo traffic.
Njengoba for iseva ukuhlaselwa, lapha kungukuthi okuhloswe ngasiphi ukusingathwa umhlinzeki ethile okungukuthi ukuthi inikeza. Futhi kungakhathaliseki ukuthi ngoba kungase kuthinteke ne abanikazi indawo. The main isisulu - ukuthi umhlinzeki.
Isicelo inhlangano DDoS-ukuhlaselwa
Nanku ukugcwaliseka ukuthi DDoS-kuhlasela. Indlela ukukwenza ngosizo amathuluzi ezikhethekile, manje nazo ke. Vele uqaphele ukuthi isicelo yalolu hlobo ngempela into eyimfihlo phezulu futhi akuzona. On the Internet, bayakwazi kuyatholakala uma kulandwa khulula. Ngokwesibonelo, uhlelo elula kakhulu futhi baziwa kakhulu ngokungathathi-DDoS-ukuhlaselwa ngokuthi ULoic wabeka ngokukhululekile ngaphandle kuwebhu ukulandwa. Nayo ungakwazi kuphela ukuhlasela amasayithi terminals nge URL- aziwayo futhi IP-based.
Uyithola kanjani ngesikhathi ekuchithweni kwayo IP-ikheli isisulu, ngenxa yezizathu eziphathelene nezimiso zokuziphatha, thina ngeke kubhekwe. Sikholelwa ukuthi idatha kokuqala esinakho.
Ukuze agijime isicelo usebenzisa Loic.exe elisebenzisekayo, ngemva kwalokho phezulu imigqa emibili ohlangothini lwesobunxele yomthombo amakheli ukulingana, bese ucindezela ezimbili «Lock» inkinobho - nje phambi emgqeni ngamunye. Ngemva kwalokho, iwindi sizophendula isisulu yethu.
Ngezansi kukhona ngezilayidi ukulawula nombuzo Izinga TCP / UDF kanye HTTP. Inani ezenzakalelayo kusethelwe ku- "10". Ukuze wandise umkhawulo, bese ucindezela inkinobho enkulu «Imma CHARGIN Mah Lazer» kulokhu kuhlasela. Misa ke, ungakwazi ngokucindezela inkinobho okufanayo.
Ngokwemvelo, umuntu lokuqala isimiso esinjalo, okuyinto evame ukubizwa ngokuthi "laser gun" Imbangela izinkathazo isisetshenziswa esithile esingathí sina noma umhlinzeki ngeke isebenze, ngoba ukuvikelwa DDoS-ukuhlaselwa ukukhwezwa lapho inamandla. Kodwa uma iqembu labantu ukusebenzisa amaningi ala izibhamu ngesikhathi esifanayo, kungenzeka okuthile futhi ngiwufeze.
Ngakolunye uhlangothi, noma ubani ozama ukungabi uzame DDoS-ukuhlaselwa, kufanele uqaphele ukuthi ukukhangwa ku "ukuthi" ohlangothini kakhulu, abazona iziwula. Abakwazi kalula ukubala amakheli kusuka lapho kuhlasela ezifana Kwenziwa, futhi igcwele nemiphumela edabukisayo.
Ngokuphathelene abanikazi ukusingathwa abavamile, umhlinzeki ngokuvamile unikeza iphakethe ngokushesha nge Ukuvikelwa ezifanele. Kusho ukuvimbela izenzo ezinjalo kungaba kakhulu. Kuyinto, isibonelo, iqondisa kabusha kuhlaselwa the umhlaseli, ukuhanjiswa izicelo engenayo ngaphesheya amaseva amaningi, i-traffic zokuhlunga, ukuphindaphindeka Ukuvikelwa izinhlelo ukuvimbela ubala, umthombo, nokunye. D. Ngokwengxenye enkulu, umsebenzisi evamile okufanele ukhathazeke ngakho.
Kubonakala kusukela kulesi sihloko, kuba sobala ukuthi ukwenza DDoS-kuhlasela yokubakhona isofthiwe ekhethekile, futhi abanye abangu ayisebenzi idatha kokuqala. Enye into - ngabe kubalulekile ukukwenza, ngakho ngisho abasebenzisi abangenalwazi, abanquma udlale, ngakho nje for fun? Wonke umuntu kumele baqonde ukuthi izenzo zakhe babengokoqobo kunoma isiphi isimo kuzokwenza ukuziphindiselela kuthabathela ecaleni ehlaselwa, futhi, njengoba umthetho, hhayi ukuze kuzuze umsebenzisi owaqala kuhlasela. Kodwa, ngokusho kwe-Criminal Code emazweni amaningi, ngoba ukwenza kanjalo engafinyelelwa, njengoba besho, ezindaweni akunjalo kude kweminyaka embalwa. Ubani ofuna ke?
Indlela ukusetha isikhathi nosuku kukhompyutha: izindlela kanye nemiyalelo
Indlela yokwenza imenyu iqembu "ukuxhumana"
Uhlelo ukuhlola angaphandle kanzima emkhakheni eziphukile. hard disk software ukuhlola okusheshayo
Skrini indlela yokukwenza wadubula HTC isikrini
Indlela ukuxazulula emaphazili lanetincetu izinhlamvu izithombe: imithetho, amathiphu, iseluleko
Iphepha ubuchwepheshe: ekhaya, kule mboni, e China Lasendulo
Udweba kanjani uCaptain Melika? Dala iqhawe! Incazelo enemininingwane nge step imidwebo
"Astral 3": Izibuyekezo Movie, ukuphawula, izilinganiso, sakhiwo
I-Flag of the Kuban: isithombe, incazelo yezimbali
Hierophant, Tarot: Inani. Hierophant, Tarot: incazelo nencazelo ezandleni,
Yini inovithamini P? I-vitamin P